Manampy fantsona amin'ny Apple TV ny fanavaozana: Vevo, Disney ary maro hafa | Vaovao IPhone
Manampy fantsona amin'ny Apple TV ny fanavaozana: Vevo, Disney sy maro hafa
Vaovao IPad | | Apple tv, iPad, Apple products
fa Vevo dia hiseho vetivety amin'ny Apple TV tsiambaratelo misokatra io. SAINGY Nanaitra anay ny Apple tamin'ny fantsona maro hafa hita ao amin'ny birao Apple TV: Vevo TV, Disney Channel, Disney XD, The Weather Channel ary Smithsonian Channel dia nipoitra tampoka teo amin'ny efijery lehibe an'ny Apple TV, ahafahan'ny mpampiasa mankafy ny atiny, na dia amina toerana sasany ihany aza.
Izahay dia manana fanamafisana ofisialy avy any Vevo ihany, izay misy any amin'ireto firenena manaraka ireto: Etazonia, Kanada, Aostralia, Nouvelle Zélande, United Kingdom, Brezila, Frantsa, Irlanda, Italia, Espana, Holland ary Polonina. Araka ny hitanao amin'ny sary (any Espana), avy amin'ny lisitry ny fantsona vaovao misy, dia tsy hahita afa-tsy Vevo ianao, fantsona video misy mozika. Tsy hainay raha mikasa ny hanitatra ireo firenena misy ireo fantsona ireo i Apple. Tsara ny manana fantsona toy ny Disney Channel amin'ny Apple TV. Raha mamaky anay avy any ivelan'i Espana ianao ary manana fantsona hafa amin'ny Apple TV, aza misalasala milaza aminay amin'ny hevitra iray.
Ny hoavin'ny Apple TV sy ny mety hisian'ny vokatra vaovao havoaka amin'ny faran'ity taona ity dia iray amin'ireo lohahevitra mavitrika indrindra amin'ny Internet ankehitriny. Ny fifampidinihan'i Apple amin'ireo mpizara isan-karazany hanampiana horonan-tsary amin'ny fantsona fangatahana amin'ny tolotra azo ao amin'ny Apple TV, ary ny mety hisian'ny Apple TV vaovao, na koa ny fahitalavitra (ilay tsaho bevava ny iTV) mandritra ny volana Novambra dia tsaho miha mahazo hery tato anatin'ny herinandro vitsivitsy. Angamba izy io dia iray amin'ireo tsy ampoizina nomen'ny Apple ho antsika amin'ny hetsika manaraka amin'ny 10 septambra (mbola hamafisina amin'ny fomba ofisialy), izay hanehoany ireo iPhone vaovao, ary angamba ireo iPad vaovao.
Fanazavana fanampiny - Vevo, ilay fampiharana horonantsary mozika, dia navaozina tamin'ny AirPlay
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple tv » Manampy fantsona amin'ny Apple TV ny fanavaozana: Vevo, Disney sy maro hafa
Miki dia hoy izy:
Any Mexico dia mbola tsy nohavaozina
Mamaly an'i Miki
ăërv¡êʬ » dia hoy izy:
Mampalahelo fa any Mexico izy ireo tsy manavao, nanana fanantenana aho volana vitsivitsy lasa izay hanana ESPN amin'ny Apple TV ary tsy misy afa-tsy i Etazonia ary izao aho VEVO ho an'ny firenen-kafa .. LASTIMA !!
Valio amin'i ăërv¡êʬ »
David Vaz Guijarro dia hoy izy:
Tsy nohavaozina ihany koa aho .. mihazakazaka amin'ny iOS 7 Beta aho ...
Valiny tamin'i David Vaz Guijarro
Harry dia hoy izy:
Mora ny mampavitrika…. miaraka amin'ny kaontiko itunes usa azoko ny fantsona vaovao rehetra ao anatin'izany ny vevo, miaraka amin'ny bear tunnel mankany amin'ny vevo.com ary midira ... nangataka ahy ho azy aho hiditra ny kaody nomen'ny vevo Apple TV hampavitrika sy hanavotra fa amin'izao fotoana izao aho afaka mijery sy milalao ny playlists noforoniko fotsiny aho fa tsy mampiditra ny faritra amin'ny horonan-tsary rehetra, tsy haiko ny antony. Tsy maintsy mamorona lisitry ny lisitry ny lisitry ny iPhone sy mijery azy ireo amin'ny Apple TV aho. Manantena aho fa manampy. Mihazakazaka avy any arahaba any Kolombia
Manavao aho: miasa ihany koa ny motera fikarohana ary manohy mandefa horonantsary mifanaraka amin'ny lohahevitra notadiavinao.
Arii dia hoy izy:
Enrique ary fantatrao ve raha misy fomba hidirana amin'ny HBO Go?
Valio amin'i Arii
cris dia hoy izy:
Salama, misy fomba manampy ny fantsona HBO GO amin'ny apple tv Colombia ??? sa fantatrao hoe rahoviana no hisy io fanavaozana io?
Valiny tamin'i Cris
Salama, niditra tao amin'ny apple tv aho niaraka tamin'ny kaonty noforoniko toa ny tany Etazonia, ary hita ao amin'ny apple tv daholo ny zava-drehetra, fa rehefa manokatra hbo dia milaza fa azo ampiasaina raha tsy any Etazonia ianao. miaraka amin'ny fantsona Disney dia mitovy tanteraka ... ka amin'izao fotoana izao, toa tsy maintsy milamina amin'ny netflix isika ...
Sofi freh dia hoy izy:
Any Arzantina dia tsy misy disney, disney xd, ilay fantsona mando na vevo, mampalahelo fa tsy havaozina izy ity
Valio amin'i Sofi freh
Apple Store vaovao mahatalanjona any San Francisco
Manomboka amin'ny iBooks (III): Mamaky boky